आरोपी लोकबहादुर एक दिन औषधि छुट्दा यस्तो सम्म हुन्थे, बिचरा ती सोझा बा किरिया बस्दै ! हेर्नुहोस् – Kavrepati
Home / समाचार / आरोपी लोकबहादुर एक दिन औषधि छुट्दा यस्तो सम्म हुन्थे, बिचरा ती सोझा बा किरिया बस्दै ! हेर्नुहोस्
आरोपी लोकबहादुर एक दिन औषधि छुट्दा यस्तो सम्म हुन्थे, बिचरा ती सोझा बा किरिया बस्दै ! हेर्नुहोस्
admin2weeks ago	समाचार Leaveacomment 347 Views
काठमाण्डौ । संखुवासभामा एकै परिवारका ६ जनाको ज्या’न लि’एको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेका लोकबहादुरलाई हिजो नै प्रहरीले सार्बजनिक गरेको थियो । प्रहरीले मृतककै १३ दिने पारिवारिक नाताका आफन्त लोकबहादुर कार्कीलाई सामूहिक ज्या’न लि’ए’को आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । उनि एक सामान्य कृषक थिए ।
लोकबहादुरले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले आफन्तबाटै घटना भएको हुनसक्ने अनुमान गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । प्रहरीका अनुसार व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण ह’त्या भ’एको जनाएको छ ।
प्रहरीको बयानमा आरोपी लोकबहादुरले भने ‘ हजुरबुवाले म’र्ने बेलामा तेजबहादुरलाई ‘यिनीहरूलाई स्याहारसुसार गर्ने जिम्मा तिमीहरूको हो। यिनीहरूको आर्थिक अवस्था अलि कमजोर छ। तैंले हेर्नु’ भनेका थिए। हामी भन्दा आर्थिक अवस्था राम्रो भएपनि तेजबहादुरले हामीलाई हेरेनन्। वास्तै गर्दैनथे।’
प्रहरी स्रोतका अनुसार आरोपीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआईबीका प्रहरीसमक्ष आफ्ना अ पराध स्वीकार गरेको जनाइएको छ ।
Previous गायक राजु परियारको भिसा आयो टिकटै आयो , लागे सबैलाई सम्झिदै प्रदेश तिर ( भिडियो )
Next कपिल शर्माले आखिर के गरे त्यस्तो एकाएक भड्किईन सधै हासीरहने अर्चना ?